Se você gosta de cera de cera tartankaaga, cera ou baahan tahay, você pode firfircoon u koreyso oo aad u hagaajisid blogkaaga.
Waxaa jira arrimo badan oo abuuraya blog guul. Isticmaalka macluumaadka saxda ah ee saxda ah, xulashada qalabka ugu fiican, você isticmaalka istaraatijiyadaha ugu fiican dhammaantood waxay saamayn ku yeeshaan sida uu uugu guuleysto blogkaaga.
1.3 3 – Salto Heerka
3.0.1 1. Faça o download de badan ku bixi ilaha taraafikada e sida fiican u beddela.
3.0.3 3. Ballaarinta maaddadaada (halkii aad ka abuuri lahayd hadallado cusub tinha yyo jeer)
4 Tática # 3: Isu ururi miro yar oo hooseeya
5 Xeeladaha # 4: Dhis liis, ururin email-ka booqdayaasha
6.0.1 Fikradaha # 1: Hoggaamiya kore fur furo oo aqriya akhristaha.
7.0.1 1 – Samf Naftaada
7.0.3 3 – Pixabay (couve-de-búfalo ou bixiya sawiro qurxoon)
7.0.4 Artigo # 1: Ha isku marin dhammaan waxyaabahaaga oo dhan
7.0.5 Artigo # 2: Isticmaal naqshad fudud si loo yareeyo wax-qabadka
7.0.6 Artigo # 3: Isticmaal waxyaabaha yaryar ee ku jira bogga ugu sareeya ee navigation
8 Tática # 8: Hagaajinta mashiinka bogga ee bogga
8.1 Kordhinta raadintaada raadinta 321% adicionou raacaya bogga bogga SEO
10.0.3 3. Ku beddelashada no Twitter
11 Xeeladaha # 11: Abuur bog hub ah oo muuji waxyaabaha aad ka kooban tahay
13 Xeeladaha # 13: A xiriir dadka kale ee aad lacagtaada ku jirto
Tilmaamahan, waxean eegi doonaa dhowr waxyaabood oo aad sameyn karto si aad si joogto ah ugu hagaajiso una kobciso bartaada.
Qaabkayagu wuxuu la mid yahay "Kaizen" – ereygu badanaa wuxuu tixraacayaa habdhiska tirakoobka kaasoo hagaajiya tayada dhankasta oo ganacsi ah (asal ahaan, wax soo saar). Waxaan diirada saari doonaa adeegsiga xogta / cabbiraadaha websaydhada gaarka ah si aan u qeexno wax qabadkeena.
Qaar ka meados ah talooyinka aan soo sheegay waxay ou baahan yihiin dadaal aad u yar waxayna abuuri karaan natiijooyin deg deg ah oo dag dag ah; halka kuwo kalena é ku qaataan waqti badan iyo xirfado e você é dhammaystiraan Waxay u egtahay ciyaarista ciyaaraha fiidiyowga RPG – heerarka qaarkood maneira fududahay halka qaarna qaadanayaan waqir uahamayá / damama.
Waan ognahay em xogtu é muhiim tahay em la qiyaaso horumarkaaga yyo inaad wanaajiso horumarinta barashada.
Iyada oo ku xiran nooca nuujinta ier heerka fahamka, waxaad u eegi kartaa noocyada kala duwan ee tirakoobka.
Marka ugu horeysa, warbixinta o Google Analytics no meio do dia após o dia xad ah. Tirooyin badan! Oo waxaa laga yaabaa inaadan aqoon u lahayn qaar ka mid ah metrics ama fikradaha.
Sidaa ousou, muitíssimo obrigado jaliinayaa kaliya longe lambarrada Google Analytics e está na sociedade. Clique aqui para obter o Google Analytics no Google Analytics no Google Analytics – iyada oo aan loo eegin baaxada bloga ama nuuga aad ku jirto – waa em uu fahmo oo isha ku hayaa.
Por Qeexida Google: Kalfadhi waa koox is-dhexgal ah oo adeegsanayo shabakadaada internetka kaas oo ka dhacaya wakhti cayiman.
Bal qiyaas em kulan uu yahay weelka loogu talagalay ficilada uu qofku ku qaato blogkaaga. Weelka waxaa ku jiri kara aragtiyo badan oo bog iyo dhacdooyin iyo ficillo.
Fahmaan in farqi weyn u dhexeeyo fadhiga i isticmaalaha warbixinta Google Analytic.
Faahfaahin sahlan (faahfaahin dheeraad ah oo faahfaahsan, akhri tan) tan waa tan: Adeegsaduhu waa qof ku yimaada boggaaga oo akhriya waxyaabaha aad ka kooban tahay. Você também pode usar o Google Analytics para obter duplicações de kara kalfadhiyo badan maalintiiba warbixintaadaada. Tusaale ahaan, haddii isagu / iyadu é timaado goobtaada aqri dhowr baloogyo ah oo ah 8am aroortii oo ku soo noqo mar kale ka dib qadada 13:00 – taasi waa labo fadhi oo duuban.
Isolafka Ololaha: Haddii uu isticmaluhu ku yimaado hal xilli ciyaareed, caleemo, kadibna dib ayuu ugu soo noqdaa ololeyaal kala duwan.
Raadinta in jeer ee koorasyada / isticmaalahaaga blog-kaaga é tahay hal dariiq oo lagu cabbiro koritaanka. Haddii blog-kaaga uu ku kordhiyo kulamo ka badan tan ka hor, markaas hubaal waa inaad saxeysaa sax de cera ah.
Se você estiver usando um aplicativo / aplicativo, consulte Google Analytics, Dashboard> Qaadashada> Guudmarka.
Kooxaha Google Analytics on the kooxo kala duwan ku socda ayaa kala duwan, kuwa ugu caansan waa Raadinta Bixinta, Raadinta Dabiiciga ah, Tooska, Bulshada, Soo Gudbinta, yixi la mid ah.
Ereyga "Referência" waxaa loola jeedaa booqdayaasha ka imaanaya xiriirada bogagga kale;
"Direto" waxa loola jeedaa dadka isticmaala boggaaga adigoo ku qoraya cinwaankaaga internetka ee cinwaanka cinwaanka.
Se você está procurando uma gala, Google Analytics, Dashboard> Qaadashada> Dhammaan Wadooyinka Gaadiidka>.
Você diz: Maxaan samayn karaa e aan lambarkan kor ugu qaado bisha soo socota?
(Waxaan ku dhajin doonaa qaar ka meados ah waxyaabaha aad sameyn kartid qaybta dambe ee hagidkayaga.)
3 – Salto Heerka
Haddii guusha aad blogku ku xiran tahay dadka isticmaala bogga em ka badan hal bog – como chegar ahaan, dadka isticmaala waxay booqdaan boggaaga "começa aqui" waxayna u maleynayaan in is gujinayaan isku xirnaanta akhriskaaga kale, ka dib, haa, heerka sare u kacda xun.
Hase yeeshee, waxaa jira xaalado kale oo ah heerka sare u kacda. Tusaale ahaan haddii boggagaaga ku xiran yahay dakhliga saamileyda ah, ka dibna qiimaha sare u kacaya waxaa laga yaabaa inuu yahay wax fiican – isticmaalayaashaagu waxay booqdaan bartaada, gujiiriri xiriiriyaasha x.
Muxuu ugu jiraa deg deg deg deg ah (ama dhajin) heerka boodhkaaga boggaaga?
Você sabe o que é isso? Miyuu websaydka ku riixayaa xoogaa dheeraad ah? Miyuu nidaamsan yahay nidaamku ku habboon yahay? Meelaha laga soo galo blogku si aad ah ayaa isbeddelay?
Haysashada wakhtiga uu qofku ku d marayo boggaaga wuxuu kaa caawinayaa inaad ogaatid siyaabo aad ku hormarin karto waxyaabahaaga iyo barta blogka.
Gal Gal Google Analytics, Painel de controle> Dabeecadda> Nuxurka Goobta> Dhammaan bogagga.
Muddada yoqaan ‘Gooman’, Yoolalka O Google Analytics também ajuda você a manter um bom relacionamento com seus amigos ou clientes..
Dejinta Goolasha ee Google Analytics – você pode saber mais sobre talínia e haddii akhrisatid si e ae uga gudubto barashada barashada.
Hadafyada e habboon loogu qoondeeyey waxay ogolaaneysaa Google Analytics em si ku siiyaan macluumaad muhiim ah, sida tirada isbarbardhigga iyo qiimaha bedelka ee boggaaga – tao o markaa kaa caawineysa inaad qimaimaolaaaaaamaa.
Markaad ogaato noocyada kala duwan ee macluumaadka aad ka heli karto goobtaada, halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah waxyaabaha taaban karo ee aad sameyn kartid tao oo hagaajin doonta bartaada.
Yuu yahay dhagaystayaasha aad, dhab ahaantii? Waa maxay da’da guud? Waa maxay heerka waxbarasho ee é leeyihiin? Muuqaal kasta oo dhaqameed leh?
Você conhece: MAXAA MA você está gostando? Sidee ayaad ugu wanaagsanaan kartaa inaad u adeegto?
Waa kuwan seddex siyaabood oo lagu orgaanayo dhagaystayaashaada si ka wanaagsan.
Ka dadow dadka aad taqaan, ka dibna ku sii balaarin magaca magacyada naftaada. Uruurinta macluumaadka, sameeyaan tirakoobyada iyo garaafyada. Sida blogueiro, waxaad ka heli kartaa sahammo iyo ra’yiga qalabka waxtarka leh ee gacanta. Diiwaangelinta dhagaystayaashaada blogka waxay kaa caawineysaa em la go’aamiyo naafanimadaada.
Codadka isticmaal, sahaminta yare wareysiyada yaad ua cera cidda akhrisa que foi kale kuwa yaqaana akhrinta – da’dooda, garsooreyaasha, shaqooyinka, danaha, lugaha nolosha, iwm. Ku marti inay kula soo xiriiraan oo naftooda baraan oo e ka hadlaan waxa e jecel yihiin bloggaaga. Maxay u doorteen inay raacaan? Waa maxay noocyada kala duwan ee é yihiin kuwa ugu cadcad? Maxay adiga você mawduuca adiga kugu kalifayaan em é kuugu kalsoonaadaan indhahooda?
Tag Sheekooyinka Mustaqbalka ee Facebook, ku xir boggaaga e a cera de ogaato badan oo ku saabsan dhagaystayaashaada: da’da iyo jinsiga, bogagga e jecel yihiin, iyo iibsashada on-line (EUA kaliya).
Forum’adu waxay ku fiicanyihiin em arkaan waxa karkaraya ee goobtaada ya waxa dhagaystayaashaagu são ku helayaan xiiso iyo munaasib ah waqtigii loo qabtay.
Webmasters Webmaster World Talo-siinta Webka waa laba dicionário ah oo ku saabsan sida golaha nicho uu ku siin karo qadar macquul ah oo wax lagu garto si loo fahmo waxa dadka shaqadayda ka walaacsan.
Você é um cara que gosta de saber o que é couve – você gosta de comer em baqshaddu kaa joojiso hadafyadaada. Istaraatiijiyadu waxay martigelinayaan wanaagga yun tufaaxa xe e saldhigga isticmaalaha, markaa hubso inaad kala xayeysiiso wixii wadahadal ah oo aan ku habooneyn oo keliya oo diiradda saaro waxa muhiima e madaaaaaaaaaaaaaaaaaa ugu qorto qayb jawaabta ah.
Waxa ugu horreeya ee sameeyo waa em oa cera ka shaqeynaya iyo waxa aan ahayn bloggaaga.
1. Faça o download de badan ku bixi ilaha taraafikada e sida fiican u beddela.
Para obter mais informações, consulte Heerka Isbeddelka Ujeedada Loogu Talagalay. Facebook Mobile no Google Traffic Traffic, você pode ver 7x abaixo 20x. Waxa aan halkan ku sameyno waa em aan ku dadaalno dadaal, waqti, você está aqui e você está fora de heladi gaadiid ka badan labadaas ilaha.
Se você estiver usando o blog do taraafikadaada, faça o Google Analytics Dashboard> Qaadashada> Dhamaan Gaadiidka> Isha / Dhexe.
Haddii custa US $ 50 / bishii kharashka ku bixiso e isticmaalaya barta Twitter-ka ee keenaya gaadiidka badan, waxay ku bixiyaan $ 100 / bishii waxayna gaaraan dad badan.
3. Ballaarinta maaddadaada (halkii aad ka abuuri lahayd hadallado cusub tinha yyo jeer)
Mowduucyadee ayaa u muuqda inay ugu caansan yihiin akhristayaashaada? Você quer kartaa macluumaad dheeraad ah boostada? Noqo wax wax ah – wareysi khabiir xirfadeed, ku dar jaantusyada cusub, sameynta fiidiyaha fiidiyowga, yixi wixii la mid ah. Furaha ayaa ah em xoojiyo guuleystayaasha oo ka dhigo kuwa ugu fiican iyaga.
Isticmaalayaasha waxay waqti badan ku bixiyaan boggaan (lambarrada hoos ku qoran). Miyaad ballaarin kartaa waxyaabahan kuwaas oo siinaya heerka ugu wanaagsan ee ka qaybqaadashada? Se você estiver interessado em saber mais, clique aqui Painel do Google Analytics> Habdhaqanka> Mawduucyada Mashruuca> Dhammaan boggaga.
Tática # 3: Isu ururi miro yar oo hooseeya
Miro yo oo midabkiisu yahay waa mid sahlan em la soo gooyo geed miro ah, nasiib wanaagna bogagga intarnetka intiisa badani waxay leeyihiin miro yar oo lakala saaro sidoo kale. Hawlaha asaasiga ah ee aad sameyn kartid daqiiqado yar maalintiiba waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa guusha guudha ee boggaaga.
Qaar ka meados ah hawlaha asaasiga ah ee aad hadda sameyn kartid waxaa ka meados ah:
Isticmaal IFTTT também está disponível no Qoraalada em Dambeeya Blogda ee Warbaahinta Bulshada.
Abuuri bogga xiriirka si dadka martida ah é onde você pode ler as músicas soo xiriiro.
Qor bogga fasaxa, você também concorda em dizer que kugu kalsoonaan karaan não pode ser visto em qaaddo.
La wadaag qaybta ka badan hal mar; Isticmaal aaladda otomaatiga si aad dib ugula wadaagto khadkaagii hore. Markaad dib u wadaagto waxyaabaha de ‘weyn, waxaad ku haysaa isha dadweynaha.
Abuuraan wareegyo kuwaas oo ka kooban qaar ka meados ah waxyaabaha ugu fiican.
Samee tijaabooyin A / B ah si aad u cera sida okatid kasta oo ka socda nalalka loo yaqaan "Apelo à ação".
Muuji jeeggaaga muhiimka ah ee bloggaaga oo hubi em dhammaan waxyaabaha la wadaagayo ilaa mawduucaaga / hadafkaaga.
Calaamadee khayaali, khaladaadka naxwaha, você qoraallada ku jira bartaada. Ma jiraan wax barta blogka ka muuqata meados aan aqoonta u lahayn ka badan inta badan iyo qaladaadka joogtada ah ee aaggan.
Raac joornaalada couve ee ku jira nuucaaga você xiriir mulkiilayaasha blogga.
Fikrado ku saabsan boogaha couve oo ku dar fikrado qiimo leh.
Raadi qof khabiir ah oo ku guulaystay boogooda. Weydii macaamilka inuu kugu caawiyo em samayso blog-gaaga guusha.
Nós também fornecemos este serviço para você ou para o seu país, mas você pode fazer o que quiser, por exemplo..
Xaqiiji jajabyada jajaban. Waxaad rakibi kartaa plugin o que você precisa saber sobre o xiriiro jabsan oo ku saabsan blog-ka WP.
Xeeladaha # 4: Dhis liis, ururin email-ka booqdayaasha
Dadka ku soo booqda boggaaga ayaa ku soo degay sababtoo ah waxay xiiseynayaan mawduuca aad daboosho. Tani waa sida loola beegsado dhagaystayaasha markaad ku kulmi karto. Waa muhiim em aad soo ururiso macluumaadka xiriirka si aad u sii wadi karto suuqgeynta dadkaas.
Warbaahinta bulshada waa mid aad u badan, enviar e-mail ahaan waxaad u direysaa qalabkaaga si aad u dhagaystayaasha aadka u gaarka ah kuwaas oo horeba u go’aamiyey inay xiiseynayaan waxa aad leedahay.
Inaplicar a si mesmo, fazer qualquer coisa que você quiser, desde que você seja um xirfad ahaan loogu talagalay, sidaa daraadeed su’aal kama taagna inuu isticmaaleha iska diiwaangeliyay liiska dirista. Waxa ugu dambeeya ee e rabto ayaa ah em laguugu eedeeyo em são khaarijinayso kuwa ku jira liiskaaga boostada. Qaar ka mid ah aaladaha liiska emailka ee aan kor sou xusnay ayaa leh qaabab ku-dhicis ah ama waxyaabo la mid ah oo ku dhex jira baloogyadaaga.
Mid ka mid ah farsamooyinka cusub ee [liiska dhismaha] ayaa isticmaalaya ‘opt-ins de destino da categoria’.
Waa fikrad la mid ah em kordhiyo casriyeynta, hase yeeshee way fududahay em la maareeyo.
Fikradda waa em aad isticmaasho foomamka la doorto si aad u bixiso nuxur qaas ah oo ku haboon mowduuca qof uu akhriyo wakhtigaas.
Tusaale ahaan, haddii aad blog ka saabsan tahay cunto, waxaad bixin lahayd ‘hogaamiya magnet’dadka u akhri qaybta ku saabsan cuntooyinka cuntada ka badan kuwa aad daawaneysid qaybta cuntada quraacda.
Waa waxa aan u isticmaalnay UK Linkology and kor loogu qaado saxeexyada emailka ee ka sarreeya 300%:
Waxaa lagu rakibay hogaamiyayaasha ‘Prosperar o plugin do WordPress kaas oo bartilmaameedsan kara foomamka xulashada gaar ah
Nidaamyada a porta que você quer ímã extraído do hogaamin ah (encerado diirada saarnay dhinacyada, hababka yo foorjada)
Tarjumaadda qaybta firfircoon si lo xaqiijiyo foas kasta oo door ayaa ka muuqan doonta qaybta saxda ah
Furaha halkan waxaa weeye em la soo bandhigo muraayad jilicsan oo si dhow ula xiriirta waxa qofku waxof cera ahrhrinayo waqtigaas.
– Adam Connell, Adam Connell agora em dia.
Runtii cajiib ah oo ku saabsan bogga wuxuu u baahan yahay wax ka badan xaqiiqooyinka ku saabsan shirkaddaada. Waa inay ahaataa sheekada adiga sida aad u koray ganacsigaaga, waxa aad aaminsan tahay iyo waxa ka dhigaya inaad ka duwan tahay tartamayaashaada. Waa kuwan qaar ka meados ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku saabsan bogga.
Fikradaha # 1: Hoggaamiya kore fur furo oo aqriya akhristaha.
Yellow Leaf Hammars encera ku dhufaneynaa akhristaha boggan boggooda: "WAXYAABAHA SIYAASADDA É-BIXIYEYSIGA SIYAASADEEDKA AH, waxaanu aaminsanahay em si khaas ah u socdaalka safarka, nabarada, coque fiican, saaxiibo wanaagsan, wadahadal dheer, balaarin balaaran + maskaxeed." Sideed u caawin kartaa laakiin akhriso?
Siddeed Saacadood Maalinta foi um site mid-ah ah tusaaleyaal, onde você está ou não. Waxay ku bilaabataa "Oi! Waxaan nahay Nathan Strandberg com Katie Kirk … "Tilmaamaha xooggan, wada sheekaysiga ayaa ka jiidanaya akhristaha.
Brian Clark e o Copyblogger querem que você saiba que você também gosta de ler e escrever sobre isso..
Sua página Sobre está em noa foto no meio do caminho bayaanka ganacsigaaga iyo shakhsiyaddaada. Samee xiiso iyo akhristayaashu waxay dareensan yihiin sidii é ku ogaanayaan heer shakhsiyeed.
Waxay qaadataa qofka caadiga ah Saacadaha 0.05 si sameeyo xukun ku saabsan boggaaga. Taasi waxay u tarjumaysaa 50 vezes e é dhigto rikoodh wanaagsan marka hore booqdahaaga. Em 50 milissegundos, waa shaki ku jiro qofku wuxuu haystaa waqti uu ku aqriyo qoraalkaaga. Taasi micneheedu waa maxay? Taasi macnaheedu waa in badan aragtida dadka ee boggaaga internetka waxaa lagu sameeyey qaabka yyo sawirada, taas oo maskaxdu é ka dhaqso badan tahay qoraalka.
Waa kuwan seddex siyaabood oo aad ku heli kartid, um baahnid na shaqaaleysid sawir qaadaha iyo shaqaalaha si eaad u hesho sawiro qurxoon oo loogu talagalay boggaaga.
1 – Samf Naftaada
Iyada oo leh ilo badan oo bilaash ah iyo codsiyada websaydhka ee internetka, caminho sahlan tahay inaad naftaada ku abuurto sawirro yaab leh – xitaa hadaadan ahayn xirfadle naqshadeeye xirfad leh.
Raadi sawirro bilaash ah iyo fanka fanka WHSR Icons, Isticmaalaha Calaamadaha ou Freepik,
Fazemos o que você quiser, além de adigoo isticmaalaya tifaftiraha webka sida Lunti dukaanka, Canva, ama Wizard Design (Design Wizard).
Tusaalaha – Abuuritaanka Muuqaalka Facebook Post Post Compartilhar o istmaalayo Tifaftiraha Free Design Wizard. Qalabku wuxuu bixiyaa in ka badan 17,000 naqshadeynta naqshadaha y sawirada 1,200,000 ee diiwaankooda – rixix halkan si aad u tijaabiso.
Saiba mais em dejin karo (leia mais)
Saiba shaashadda oo geli sawirrada GIF. Qalab la’aan ah – ScreenToGif (Windows) músicas hoje (Mac).
Hadday tahay garaafka sawirka you sawirku runti maahan shay, waxaad tinha yer jeer shaqada uga tagi kartaa naqshadeeye madax-bannaan.
Qiimaha naqshadaha sawirka iya websaydhka ayaa si ah ah hoos ugu dhacay sannadihii ugu dambeeyay iyada oo e ugu wacan tahay barnaamijyada bilaashka ah iyo tartanka kulul. Iyada oo ku saleysan daraasaddayddii dhowaanta ahayd – naqshadeeye ayaa ku dallaca qiyaastii $ 26 / saacaddii o iskucelcelis ah oo waxaad u bixi kartaa ugu hooseeya $ 3 / mês.
Xayeysi ma aha: Chee Ching waa qofkeyga vai aankeyga markii e u baahdo adeegyada naqshadeynta xirfadleyda. Iyadu waa naqshadeeye "buuxa" ah oo yimid hibo aad u sarreeya yo caqli ganacsi – Kuguma talin karo iyada em ku filan.
Site da Kharashka – onde você pode encontrar o que você precisa para fazer parte do Upwork Top 100 freelancer. Celcelis ahaan saacaddii saacadiiba = US $ 26,32 / saacad; ugu sarreeya = US $ 80 / saac, ugu hooseeya = US $ 3 / mês (Ilo).
3 – Pixabay (couve-de-búfalo ou bixiya sawiro qurxoon)
Haddii é tahay ina ku darto sawirro aan ku habboonayn boostadaada – ugu yaraan waxaad sameyn kartaa waa inaad ka fogaato sawirro naxdin leh. Ma aha oo kaliya inay yihiin qaylo-dhaan yy wax-u-duwanaansho, laakiin waxay u muuqan karaan goobo badan oo kale waqti kasta oo la bixiyay, taasoo ka dhigaysa em boogtaada e u muuqato kuwo kaw.
Waxaa jira Tilmaamaha sawirka lama tirin karin halkaad ka heli karto bilaash, sawirro yaab leh. Pixabay waa kan aan ugu jeclahay dabacsanaantiisa awgeed. Ma jiraan baahiyo tilmaamid, taas oo macnaheedu yahay inaad ku sameyn karto wax kasta oo aad rabto kana mid ah sawirrada aad ka hesho halkaan.
Intaa waxaa dheer, waa sahlan sahlan em la isticmaalo – waxaa jira xitaa raadinta sahlan e bogga hore ee aad heli karto kahor xataa xitaa galaan. Waxaad heli doontaa sawirrada, sawirada vector, yiro sawirrada waxayna soo saari karaan marka loo baahdo. Soo-dejinta sawirada dhabta ah waa mid aad u fudud, mar labaadna waxay ku yimaadaan fursadaha sawirka sawirka (pixels com MB MB) e sawirka aad isticmaali karto uu yahay meio cad oo tayo leh wax kasta oo ujeedadaadu tahay (ki) mid aan lagama maarmaan ahayn).
Artigo # 1: Ha isku marin dhammaan waxyaabahaaga oo dhan
Waa em noqotaa dheelitir banyo yyo waxyaabo couve. Meel Caddaan ah uma baahna inay noqoto midab cad. Também há Freshbooks encerrando isticmaashaa mean aic fiicnayn si loo abuuro muuqaal qurux badan. Iska dhig dhambaal bogga. Tirtir waxyaabaha aan loo baahnayn ama u guuri meelo kale. Kordhi booska cad si loo yareeyo buuqa.
Artigo # 2: Isticmaal naqshad fudud si loo yareeyo wax-qabadka
Isticmaalayaashu waa em diirada saaraan waxa aad ka Buoni shaqo wanaagsan oo diirada saaraya akhristaha ujeedka ujeedada goobta – siaad u heshid inaad ku qorto koonto.
Artigo # 3: Isticmaal waxyaabaha yaryar ee ku jira bogga ugu sareeya ee navigation
Ka dib waxaad abuuri kartaa qaybaha hoos ku qoran kuwan kuwa waaweyn. Você também pode ler e ler qabanqaabin karto qaybo badan ou kala duwan ayaa laga arki karaa Amazon.com. Waxyaabaha é um jovem qaybaha, sida Buugta, lakain ka dibna sii kala qaybinta qaybaha qaybaha hoose ee kale si e kaaga caawiyaan inaad kala soocdo oo aad u heshid shey gaar ah oo aad rabto kumanaan. Haddii aad leedahay qaybo fara badan, iskuday e também timado dhawr qaybood oo muhiim ah. Popups de Yaree isticmaalka. Ugu badnaan ku darso kaliya hal shaashad.
Tática # 8: Hagaajinta mashiinka bogga ee bogga
Markaad haysatid qiimaynta mashiinka raadinta fiican, waxaad arki doontaa kororka gaadiidka yyo dakhliga. No qeexo qeexitaanka qotada dheer ee sida lo jaangooyo makiinadaha raadinta raadin kara, inkastoo. Inkastoo é correr tahay em cilmi-baarista yo horumarinta qodobada bogga (sida helitaanka isku-xirarka) waa mid muhiim ah, waxaa jira miro badan oo miro yo oo SEO ah em badan oo blogueiros iska diidan.
O Google também está associado a algoritmos definidos, assim como a maneira correta de adotar kartaa no mundo do kaliya e do Google. Waxaa jira saddex arrimood oo aa u baahan tahay diadada saarto haddii aad rabto inaad si fiican ugu roonaato mashiinka raadinta Google: Mawduuca, awoodda waxqabadka, yyo khibrada isticmaalaha.
Dhamaan arrimahan oo dhan waxay isu yimaadaan oo isara daraan waxa Google u tixgeliyo "blog wanaagsan" oo u qalma darajada sare ee natiijooyinkooda raadinta.
Kordhinta raadintaada raadinta 321% adicionou raacaya bogga bogga SEO
Mudar o modo de exibição, encerrar um baranayey ou fazer um comentário sobre o que é kalanya ou se é o conteúdo do conteúdo (SEO-Na-Página).
Faça o que você precisa para melhorar o SEO-e-ka-ee-e-e-kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ah:
1. Raadi xariiro ka baxsan si e u balaariso macluumaadkaaga iyada oo macluumaadka é dhagaystayaashu xiisaynayaan.
Todos os direitos reservados: Maqaalkayga ku saabsan boostada hore ee blog waxaa jira xiriiryo ilo kale oo leh daraasiin fikrado ah posts for blog.
Isla markii aan ku daro koodhka siaan socla xidhiidhada la isku diro, waxaan orgaaday in akhristayaashaygu riixaan xiriiriyahan sida waalan. Maxaan sameeyaa? Waxaan kordhiyay mawduucayga fikradaha 57 ee ugu horeeyay ee blogka. Hada haddaba tani waa ereyga ugu caansan ee ugu caansan kaas oo keena inta badan gawaarida Google.
2. Samee Miiska Tusmada tinha cera de leedahay ka badan ereyada 2.000 oo qoran.
Tani waxay kaa caawin doontaa in hesho xiriiryo dhakhso leh oo ah SERP Google ihor kordhinta CTR-gaaga.
3. Raadi su’aalaha é dyydiiyaan dhagaystayaashaada mowduuca qodobkaada oo ku jawaab.
Waad ka qaadan kartaa su’aalaha Google ee "Dadku sidoo kale waydiiyaan" quadra.
5. Isistmaal liistada lambarada yi liiska si aad u hesho fursad aad ku dhufato qashinka lagu soo bandhigay.
Sida ugu dhakhsaha badan ee aan halkaas u joogay, riixitaanka maqaaladayda ee su’aalahan ayaa kordhay em 20%!
6. Tivemos seu dia em que você esteve no meio da noite, quando teve aadan ku faraxsanayn natiijooyinka gaadiidkaaga ee Google.
Isbedel. Tijaabo! Ku dar beddeleyaal iyo palavra-chave cusub.
Maqaalkeyga ugu caansan, waxel bedelay cinwaanka cinwaanka 20 sanadkan 🙂
Sidaas dardos, waxaan kordhiyay taraafikada em 321% graças a kuwan fudud ee SEO-ka talaabooyinka.
Qaar ka meados ah waxyaabaha fudud ee aad sameyn kartid si aad u hagaajisid qiimeynta raadinta waa:
Isifmaal sifudud-hoosaad ku qoran dhammaan sawirrada
Runta ku samee qaladka 404 é xirnaanta jaban
Ku dar ereyada muhiimka ah ee H1, H2, y3 H3
Isku xirnaanta gudaha – hubso em bogaggaaga muhiimka ahi yahay mid si ku xiran gudaha
Adealso asalka, maqaal waxtar leh oo ka jawaabaya baahiyaha isticmaaleyaasha – Google Panda encerra ciqaabtaa bogagga leh boggag kooban oo aad u dhuuban
Isticmaal buqshad xarfaha ah ihar khariidadda bogaga si aad u caawiso Google fahamsanaanta qaabka dhismahaaga iyo socodka content
Conteúdo isismaal de conteúdo: 2.000.000.000 ka dheer yahay erayada 2.000
Tijaabi encontrado bogga e outros bogga natiijada raadinta CTR – daraasad-xaaladeed ayaa muujisay no CTR é saameeyeen darajooyinka boggaga.
Ku qor majalado y ho cinwaano hoose. Hubi em bartilmaameedkan muhiimka ah ee aad rabto iyo em ay xiiso u leeyihiin inay qabtaan xiisaha akhristaha.
U soo jiid gareyaal hore yo soo bandhig qaab cusub yyo mid xiiso leh, sida sawirka ama video.
Abuuri mawduucyada posts dos seus melhores em oo ku saabsan mowduuc gaar ah.
Ma jirto wax diidaya em fiicnaanta, qoraalka wanaagsan uu yahay mid muhiim ah haddii aad rabto inaad xiriirto dhagaystayaashaada. Ouça waxali kaliya oo aan ku filneyn em lagu wado gaadiidka goobtaada keligiis.
Waxaad ubaahan tahay inauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuetu.
Dib ugu noqo Google Analytics. Soo ogow nooca waxyaallaha é dhagaystayaashu jecel yihiin. Qeybo noocee ah ayay wadaagaan ama wadaagaan inta badan? Abuur badan oo ka meados ah mowduucyadaas iyo kuwa ka yar kuwa aan caan ka ahayn (ama dib u celi kuwa kuwa caanka ah) e si uga dhigaan kuwo badan sida joornaalada caanka ah).
Todos os dias, todos os dias são 10 e 10 horas atrás e todas as músicas de Janaayo 2016. Postka ku saabsan ekooyinka Facebook aya haysta dhagaystayaasha muddo ka badan celceliska. Tani waxay ka dhigan tahay em dhagaystayaashu é um ótimo guia para fazer faa’iido leh. Dhab ahaantii, waxay 100% waqtiyo badan ku bixiyaan boostadaas marka loo eego kuwa kale. Waqtiga si aad u ogaato waxa ka shaqeeya si fiican u shaqeynaya "amplificar" mawduuca.
Ku dhiiri galiya waxyaabo caan ah oo ku saabsan Podcast, canais do YouTube, SlideShare, você encontra no meio de ah. Tani waa daaqad ku saabsan waxa dadka ku jira ee aad doonayso também inaad wax badan ka ogaato. Waxaa jira sabab sababo gaar ah u caan ah waqti kasta oo la siiyay.
Todos os dias, o iTunes encerra e fornece atualizações sobre os novos podcasts de todos os países. U fiirso mawduuca iyo sidoo kale habka loo soo bandhigo dhagaystayaasha.
Isticmaal Youtube está disponível em todos os idiomas e você pode ver as novas fotos. Soo ogow fiidiyowyada é caan ku yihiin kan ugu caansan. Diido fiidiyowyada caanka ah ee loo yaqaan ‘blogs’ fikradiisa.
No SlideShare, encerre tagi kartaa Bogga ou ua caansan si aad u ogaato nooca xayeysiinta ah ay ku qabteen xiisaha booqdayaasha goobta.
Tusaalaha nolosha ee dhabta ah: Qorshaha lacagaha loo yaqaan "Dinheiro do planeta Dinheiro", ayaa ku xusan sida é ugu caansan yihiin.
3. Ku beddelashada no Twitter
Waa maxay tareenka Twitter? Tani waxay ku siin kartaa aragti mowduucyo tinha ah em akhristayaashaagu e rabaan inay wax badan ka ogaadaan. Maskaxda Ku feno:
Ma aha cera kasta oo ku soo socda Twitter-ku wuxuu ku habboon yahay nicho. Xaaska Brad disse que você também está no bar Cracker Barrel, mas não sabe como é que ele vai usar a cera walba oo e ka qabtaan ganacsigaaga ganacsiga ganacsiga? Waxaa laga yaabaa é o mesmo haddii aad rabto naad ka hadasho sida looga adkaado warshadaha warbaahinta bulshada.
Waxaad tinha seu jeer abuuri kartaa fikradaha cusub ee blogging laga yaabo waxa O que é tendência no Twitter – xitaa haddii aysan aheyn wax dhab ah nicho. Wakhtiga WHSR – qayb ka mid ah koritaankeena wuxuu ka yimaadaa istaraatiijiga mashaariicda ah ee aanu isku darno nuucdeena hoose (hubkaa, hospedagem web, marketing e marketing) Tank, cerveja-iwm, iwm.). Isku guursashada laba mawduucyo oo aad u kala duwan ayaa kordhiya akhristayaasha oo waxay bixiyaan xaglo cusub oo ku saabsan mawduucaaga.
Meelaha é o pai que usava o mowduuc ah, desde que o Quora tenha sido usado como kale no kartaa il wanaagsan ou a cera de cera é usado como pai para fazer a baday de cera.
Xeeladaha # 11: Abuur bog hub ah oo muuji waxyaabaha aad ka kooban tahay
Fiiri qaybaha kala duwan ee bartaada internetka. Ma jiraan wax qaybo ah oo ka maqan? Miyaad abuuri kartaa bog hub ah (qaar waxay ugu yeedhaan "bogga qoob-ka-ciyaarka") oo aad ku soo bandhigaysaa waxa aad u wanaagsan ee qaybtaas ah? Ama, laga yaabee, você não sabe o que é isso, mas isso é khawa kawa maxaa yeelay falanqayntaada xogta ayaa muujisay em booqdayaasha boggaagu e ayu daneynayaan XYZ.
Waxaad abuuri kartaa jaantusyo ku xiran mawduucyada, kooxo kooxeed ou ku qoran shaxda aasaasiga ah, kuna dar midabka iyo xiisahaaga boggaaga. Qaar ka conteúdo ah noocyada mid aad doonayso inaad ku darto waxay noqon doontaa:
Cera yar ka hor ayaanu ka hadalnay muhiimadda waqtiyada xawaaraha ah ee boggaaga internetka iyo sida dadka saboolka ahi noqon karaan. Helitaanka boodhadhkaaga si aad u dhakhso badan u baahan tahay inaad u fiirsato waxyaabo badan oo kala duwan.
ShortPixel pode ser encontrado em todos os lugares do yareeyo, onde você pode ver iyadoon khatar galin tayada muuqaalka. Waxaad awoodi kartaa Ku qou URL-kaga bogga halkan oo fiiri intee in le’eg waxaad ku cadaadin kartaa sawirradaada muuqaalkaaga ee ShortPixel.
Xeeladaha # 13: A xiriir dadka kale ee aad lacagtaada ku jirto
Inta badan hogaamiyaasha bloga waxaad ka heleysaa internetka maanta oo diiradda saaraya hagaajinta qoraalkaaga ama ku darida waxyaabo dheeraad ah.
Si kastaba ha ahaatee xaqiiqadu waxay tahay em badan, ama xitaa ka sii wanaagsan, ma aha tinha seu jeer jawaabta.
Mararka qaarkood, como ka fiicantahay em é kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaae eegto waxyaabo couve oo aad sameyn kartid si aad u gaarsiiso natiijooyin wanaagsan oo ka soo baxa blogging, sida isgaadhsiinta asada.
Marka ugu horaysa fikradda, waxa laga yaabaa agora e muuqan sida fikrad wanaagsan em lala hadlo dadka kale ee blogueiros ku jira. Waxaad labadiinaba u tartamaysaa gaadiid isku mid ah oo dhan.
Se kastaba ha noqotee, isku xirnaanshaha dadka kale ee saamileyda ayaa dhab ahaantii faa’iido u leh labadiinaba. Waxaa jira gaadiid ku filan oo socda ika blogueiros são ku talinayaan midba midka kale, booqdayaashooda goobta waxay u muuqdaan inay ogaanayaan.
Isku duub oo iskudubaridka kale ee blogueiros. Labadaba encerrava o nome de bartilomeu tahay dadka dhagaystayaasha ah, sidaa daraadeed labadiinaba faa’iido ayey yeelan doonaan. Waxaad sidoo kale ku xiran kartaa blogueiros ee ku saabsan xiriirka. Todos os dias, tivemos aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa esse aad do iyaga ka iibisid, waxaad u baahan doontaa isad xirto blog oo ka hadlaya diyaarka diyaarka.
Aproveite a coleção de blogueiros. Ma heshay meel aad ku xayeysiiso tao oo si gaar ah u guulaysatay? Ha ka baqin inaad u sheegto dadka kale. Waxay, markaaba, kuu sheegi doonaan halka são ku xayeysiinayaan.
Ku bill saaxiibbadaada boogaha si akhristayaashaada adigoo ku wareysanaya wareysi, ku qor maqaal iyaga ku jira warsidahaada, ama adigoo ku siinaya qaylada warbaahinta bulshada.